माइलाको अस्तित्व - Fitkauli
जेठाको भाइ र साइँलाको दाइलाई माइलो भनिन्छ । भाइ जेठाको मात्र भए पनि दाइ चाहिँ कान्छाको पनि हुन सक्छ माइलो । उसका बाबुका चार भाइ छोरा रहेछन् भने त साइँलाको नै दाइ होला तर तीन भाइ छोराहरू रहेछन्् भने ऊ कान्छाकै दाइ हो भन्ने ठोकुुवा गर्छु । त्यसभन्दा तल काइँलो, राइँलो, ग्वाइँलो, घाइँलो, ठाइँलो हुँदै अन्तरे, जन्तरे, खन्तरे, लखन्तरे र पानीमन्तरेसम्म जतिसुकै भाइहरू भए पनि ऊ सबैको दाइ हुन्छ । जेठो नभइदिँदो हो त ऊ नै सबैको दाइ हुन्थ्यो । त्यसैले माइलालाई अरु भाइसित भन्दा बढी जेठासित नै रिस उठ्छ होला । आपूmलाई सबैको दाइ बन्न नदिने उही त हो नि । राइँला, ग्वाइँला, घाइँला जस्ता शब्दहरू त अब शब्दकोशमै भेटिन छोडिसके । जन्तरे, लखन्टरे, पानीमन्तरे जस्ता शब्दको अर्थ अहिलेको पुस्ताले जान्दैन । साइलो र काइलोसम्म भने मुस्किलले भेट्न सकिन्छ । अन्तरे जन्तरेहरू त डाइनोसर नै भइसके । अब साइला काइलाहरू पनि पाटेबाघ भैmँ लोपोन्मुख अवसथामा छन् । यो विकासे युगले यस्तै गति कायम गर्ने हो भने अब माइलाकै अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्छ कि ?
जेठो कान्छो बाबु नानी साइलो माइलो आनामानी भन्ने उखान मैले आमाको मुखबाट सुनेको हुँ । मैले सुनेका सत्य हरिश्चन्द्र कथामा आफ्नो छोरालाई बचाउन हरिश्चन्द्रले किनेर ल्याएको केटो पनि माइलो थियो । अझ गरुड पुराणमा त जेठाले नै बाबुको काज किरिया गर्न पर्नेकुरा तोकेर लेखिएकोछ ।उसो भए माइला साइला जस्स्ता अरु छोराहरूको जन्म किन चाहियो? पौराणिक कालदेखि नै माइलाहरू यसरी अपहेलित हुँदै आएका थिए । राजाको जेठो छोरो र जनताको कान्छो छोराकोमात्र मान्यता थियो । माइलो साइलोको कुनै मूल्य थिएन । किनभने राजाको जेठो छोरोले मात्र राजगद्दी पाउँथ्यो । अरु भाइहरूको कुनै अर्थ हुँदैनथ्यो । जनताको भने कान्छो छोराले बाबुको उत्तराधिकारी हुने प्रचलन थियो । माइलो साँइलो जस्ता थुप्रै सन्तानहरू केबल डाँडाकाँडा ढाक्नका लागि जन्माइन्थे ।
सनातन धर्मको विपरित गएर होला हाम्रो देशमा राजतन्त्र नै समाप्त भयो । माइलालाई राजा बन्ने अधिकारै थिएन । गर्नै नहुने काम गरेपछि अस्तित्व पनि कसरी रहोस् र ? राजतन्त्रकै अस्तित्व समाप्त पारे माइला राजाले । यो राजतन्त्रको कुरा त प्राकृतिक नियम विरुद्ध गएर सकियो तर जनतामा पनि माइलाहरूको अस्तित्व समाप्त हुन लाग्यो र पो चिन्ता छ मलाई । म आपूm माइलो भएकोले होला अरुलाई भन्दा मलाई नै बढ्ता पीर परिहेछ ।
युग परिवर्तनशील छ । मान्छेले विकासको गतिमा निकै फड्को मा¥यो । प्रकृतिलाई पनि जित्न थाल्यो । प्राकृतिक नियम बिपरित चल्न थालेपछि माइलाको औचित्य नै हुन छोड्यो । आजभोलि जनसङ्ख्या तिब्र गतिमा बृद्धि भइरहेछ । जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्न भनेर मान्छेले अनेक अनेक उपायहरू खोज्न थाल्यो । परिवार नियोजनका थुप्रै साधन आविस्कार भए । अझ दुईमात्र सन्तान ईश्वरका वरदान भन्ने नारा उराल्न थालियो । यस्तो अवस्थामा माइलाको अस्तित्व जोगाउन गाह्रै छ ।
मैले राजालाई आरोप लाउन खोजेको हुँदैहैन । भईपरी आउँदा राजतन्त्रको अन्त माइलाबाट हुन पुग्यो । त्यसो हुँदैमा पृथिवीभरिका माइलाहरूलाई नै किन समाप्त पार्ने दाउ गर्नु पर्ने हँ ?कसैले पनि तीनओटा छोरा नजन्माइदिएपछि माइलो कहाँबाट हुने ?
मेरो यो विचारपरक लेख पढेर कसैले परिवार नियोजन बिराधीको आरोप लगाउन पनि बेर छैन । लगाए लगाउन् तर म आफ्नो अस्तित्व नै समाप्त पारेर परिवार नियोजनको समर्थक बन्न कर छैन । हिन्दु धर्म माने पनि इस्लाम धर्मको समर्थन गरेको आरोप पनि त लाग्ला ! मुसलमानहरूले परिवार नियोजनलाई पाप ठान्छन् । जति ईश्वरले दिन्छन् उति नै सन्तान जन्माउनु पर्छ भन्ने उनीहरूको मान्यता रहेको छ । जन्मेका सन्तानलाई पालन पोषण गर्नका दुःखले दुईमात्र सन्तान ईश्वरका वरदान भन्नु सरासर झुटो हो । ईश्वरमै विश्वास छ भने दिए जति जन्माउनु नै वरदान हो । गर्भपतनलाई बैधता दिने काम झन खतम । गर्भपतन र परिवार नियोजनका अस्थायी साधन वितरणले दुनियाँमा कत्रो विकृति पैmलाइरहेछ भन्ने हाम्रा महाविद्वान् महोदयहरूलाई थाहा हुनु पर्ने । मैले सकेसम्म यी अस्थायी वा स्थायी दुवै साधन प्रयोग गरेर माइलाको अस्तित्व नै समाप्त पार्न उद्धत तथाकथित बौद्धिक जमातको खोइरो खन्न नछोड्ने कसम खान्छु । देशलाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गर्नाले मलाई हिन्दुकै पुच्छर बन्नु पर्ने बध्यता त रहेन नि । धन्यवाद छ मुस्लिम बन्धुहरू ! तपाइँहरूले भए पनि माइलाको अस्तित्व जोगाइदिने काम भर्नुभएको छ । हाम्रा हिन्दु नाथेहरूले भविष्य नसोचेर यो संसार नै भविष्यमा मुसलमानमय बन्ने कुरालाई किन भसुक्कै बिर्से कुन्नि ! यता एउटा सन्तान भए पुग्ने, उता पैसठ्ठीओटा भए पनि फरक नपर्ने । अब माइलाको मात्र हैन हिन्दुहरूकै अस्तित्व संकटमा छ । खोइ ! कुरा बुझ्ने कसले ?
वातावरणको ह्रास जनसङ्ख्या बृद्धिबाट भएको हो रे ? भयो नापेर ! प्रकृतिको नियम विपरितका क्रियाकलाप गरेर बातावरण नाश भएको छ । प्रकृतिलाई मान्छेले हस्तक्षेप नगर्ने हो भने वातावरण कुनै हालतमा पनि विग्रन्न । आफ्नो सुखका लागि जसो गर्न पनि तयार रहने मान्छेको प्रबृत्तिले गर्दा सबै विग्रेको हो । जबरजस्त लादेर दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउन निषेध गरेपछि माइलाको अस्तित्व स्वतः समाप्त त हुने भो नि । होइन, दुईमात्र सन्तान भन्ने ठाउँमा तीनमात्र सन्तान भन्ने गरे पनि त कमसेकम माइलोसम्म त जोगिन्थ्यो । साइलो, काइलो अनि राइलोहरूको हालत जेसुकै होस् ।
अस्तित्वको लडाइँ त भुसुनाले पनि लड्छ भने म त मान्छे परेँ । आफ्नो अस्तित्व जोगाउन पहल गरिएन भने अरु कसले जोगाइदिने ? यही चिन्तनले ग्रस्त पा¥यो र माइलाको अस्तित्व खोज्न स्युरी खेल्दै छु । आजभोलि माइलाको अस्तित्व नै गुम्दै जान थालेकोमा यो खप्परलाई नै धिक्कार्दै छु । बेकारमा आमाको गर्भबाट माइलो सन्तानको रूपमा जन्म लिएँछु । काइलो, राइलो जस्ता तल्लो तहमा परेको भए पनि उहिले अस्त्वि मेटिन्थ्यो र चित्त बुझ्थ्यो । अब माइलोको न समाप्त भयो न त जोगिने नै भयो । यस्तो खतरामा पर्दै गरेको अस्तित्व जोगाउन साह्रै गाह्रो हुँदोरहेछ ।
काशीनाथ मिश्रित प्रकाशित मिति : जेठ २१, २०७२
सधैं पत्याइरहनु पर्छ ?